Max hupenyu hwako paunenge uri muwiricheya | Karman® Mawiricheya
Iwe unoda here kuwana zvakazara kubva kune yako upenyu ndichiri mu wiricheya? Vamwe vangati chii chinonzi kukanganisa kwekugara pawiricheya? Asi kana iwe ukatarisa pagirazi 1/2 izere, tinozviwana tiri pachedu tichitarisa kubva kune yakanaka chiyero.
Isu tinowana sei zvakanyanya munyika iyo vanhu vanoita rakawanda rebasa ravo vachimhanyisa, kufamba, uye kufamba-famba zuva rese?
Kunyange zvakadaro, hapana anoronga avo upenyu kuva pamusoro wiricheya asi hupenyu hauna chokwadi mukushamisa iwe nematambudziko. Ingo tsaona isinganzwisisike inogona kuchinja yako yese upenyu, uye unofanirwa kupinda mu mararamiro izvo iwe zvausina kumbofungidzira nezvazvo. Asi chokwadi ndihwo hupenyu haimiri nedambudziko rimwe chete kana kuremara; iwe unofanirwa kufunga zvakasiyana kuti iwe wakazvarwa patsva naiye mararamiro matsva uye dzidza maitiro ekuwana zvakawanda kubva paupenyu hwako uchiganhurirwa kune a wiricheya.
Pamusoro pe, dzidza maitiro ekugarisa kunakidzwa kwese mukati upenyu nekugadzirisa kwako wiricheya.
Izvi zvinobatsira kukupa iwe nyore mune yako mararamiro matsva kutora marwadzo kubva muhusungwa. Naizvozvo, iwe ungangoda kudzoka mune zvakajairwa mararamiro asi panzvimbo pekuzvimisikidza iwe mumba, ongorora nyika ne wiricheya. Izvo zvakare zvinotora kubva kune zvakaipira kuve mu wiricheya.
Tiri pano kuzokubatsira iwe parwendo urwu rwakaoma kuti rwuve neruva iwe.
Nekudaro, iwe unogona achiri kugona kubuda ne wiricheya uye udade zvakare kuve chikamu chenyika. Hedzino dzimwe nzira dzekukubatsira iwe kuti uwane zvakazara kubva muhupenyu hwako uchiganhurira pane a wiricheya. • Chengeta rutendo mauri
Usarase tariro mune chero mamiriro ezvinhu; chengeta rutendo mauri uye riise sechiyeuchidzo icho zvisingaite donhazvipo muhupenyu hwako.
Uye zvakare, edza kuzviita uye zviyeuchidze iwe zvakare kuti iwe unogona kuita chero chaunoda. Kunzwa kunyara, kupa zvikonzero uye kuzvitora semutoro kunoita zvako hupenyu hapana asi zvakaipisisa. Usazvirege iwe kana vamwe vakanganisa maroto ako. Iwe unogona kusangana nezviroto zvako nekutenda mukati mako uye kuvimba. Ramba uchifunga mienzaniso yeavo vanhu vakuru avo akaita zita ravo vakagara pa wiricheya. Zvakare zvinoratidza iyo nyika kuti hapana chingamise iwe kana zvinangwa zvako zvanyanya. Tsvaga zvaunoda muhupenyu
Iye zvino funga izvo zvaunoda kuitira zvekuvaraidza nguva dzose.
Uye zvakare, izvi zvinogona kuve chero chinhu kubva pane yako yapfuura iyo yawainakidzwa kare. Inguva yekunyora pasi zvese zvishuwo uye zvinokuvaraidza zvinogona kukuita iwe munhu anofara kwazvo kurarama. Iwe unogona kunge wakada gitare, kunyora, kuveza, kana chero chimwe chinhu munguva yako yapfuura. Ino ndiyo nguva chaiyo yekutangazve zvese zvaunofarira zvishoma nezvishoma uye uzviise mune ako ezuva nezuva maitiro. Dzidza kuisa zvido zvako muhupenyu
ERGO KUKUNDA S-KUFANANA SEATING SYSTEM
Iwe unofanirwa kudzidza kuisa zvinhu mu upenyu zvishoma nezvishoma asi chokwadi.
Semuenzaniso, kana iwe uchida gitare, zvinogona kudaro zvinoita sezvisingagoneki kuiridza pa wiricheya. Zvese zvaunogona kuita kugadzira gitare wiricheya. Zvinonzwika kupenga, asi hazvisi nekuti pane nzira dzakawanda dzekukwirisa gitare uye gudzazwi. Kunze kweizvi, unogona kusanganisa chero chinhu mune yako wiricheya wenguva dzose sekusona nekuruka, sketching, nhabvu, uye kunyora. Izvi zvinogona kutaridzika asi hazvisi zvevanhu vane chinzvimbo vasingakwanise kurega zviroto zvavo.
Unganidza vanhu vakanaka vakakukomberedza vanokukurudzira uye kukukurudzira kuti uite chimwe chinhu chinoshamisa uye kubvisa vanhu vasina kunaka.
Semhedzisiro, a wiricheya yakagadziriswa inogona kuvakwa zvinoenderana nezvinotsanangurwa neako mararamiro kwete nyaya iwe uri mwana, mudiki, wepakati-zera kana mukuru munhu. Zvikomberedze ne positivity
Tsvaga nzira dzekunakidzwa nekugara nehama dzako dzepedyo uye dzinodiwa. Kuve netariro vanhu vakatenderedza zvinoreva kurarama a upenyu izere nekunakidzwa, ndangariro dzisingakanganwiki, uye kunzwa kwekubatana. Ivo vanosiya zvakakosha kuita kwako upenyu sezvavanogamuchira hunhu hwakanaka mauri. Uyezve uvandudze hupenyu hwako, hunokubatsira kuita sarudzo dziri nani, zvinokukurudzira kuteedzera zviroto zvako uye kuzadzisa zvinangwa zvako. Zvishoma nezvishoma unowedzera kutsunga mune yako upenyu nekuzvikomberedza uine positivity uye uchifamba uchibva kusava nehanya.
Chengetedza cheki uye chiyero chekudya kwako
More zvakakosha, nakidzwa nechikafu chako chaunofarira uye usakanganwa kupisa ako macalorie ezuva nezuva. Kuwana mapaundi pa wiricheya ndicho chinhu chinowanzoitika kune avo vakaganhurirwa kune wiricheya.s zvisingaite kuti uzvidzore kubva pakuda chikafu chaunofarira. Asi kuitora muzvikamu zvakakodzera uye kushanda kunze nenzira yakashandurwa zvishoma kwakanaka zvinogoneka. Kana isu tichiti yakashandurwa kurovedza muviri, zvinoreva kuti iwe unogona kuita zvishoma kufamba kwemaoko ako, musoro, kana chero chikamu chemuviri.
Nekudaro, ita uropi hwako muzvinhu zvine hutano sezvo ichida simba rakawanda, uye iriwo Workout futi. Edza kutora chikafu chese chaunofarira muchikamu chakadzorwa uye uteedzere nguva nekuti vanhu vazhinji vari vanoshandisa wiricheya usaite hanya nezvekudya kwavo kwakanaka kune hutano nekuda kwekuti unorema nekukurumidza. Kufutisa zvakare kushushikana uye edza nepese paunogona kuzviponesa kubva pairi.
Wiricheya haisi chete wiricheya. Zvichienderana neyako mararamiro, unogona kusarudza ese marudzi emhando dzakasiyana kuti ubatanidze mune yako wiricheya.
13lbs LT-980 - Ultralight Kurema kuti uwane zvakanyanya kubva pawiricheya
Uye zvakare, kune akawanda mhando of wiricheya izvo inowedzera kugadzikana kuna wako upenyu, uye haufanire kugara pa wiricheya yakaoma mhando. Unogona achiri kunzwa kusununguka mu upenyu, iwe unongofanirwa kuve nehunyanzvi kana kutsvaga iyo wiricheya chaiyo kuwana nyaradzo, nyore, uye rugare rwepfungwa urwo iwe rwaunoshuvira mushure mekuona vanhu vakajairika.
Zvakadaro, unogona kuziva izvozvo upenyu hausi mubhedha wemaroses; kune akawanda kumusoro uye pasi izvo zvaunofanira kutarisana padivi uchinanga parwendo rwehope dzako. Zvigadzirire iwe pachako kune chero chipingamupinyi uye uzvikande kure nekutsunga, kusagadzikana uye kuda kwezvinangwa zvako. Kune vazhinji avo zvisinei nekuzvisunga ku wiricheya vakaratidza nyika kugona kwavo kwavanogona kunyatsoisa pamutambo wakanaka kunyangwe paine vatambi vakanyanya. Zvishoma kune a wiricheya hazvireve kuti haugone kuita chero chinhu nekufamba; zvinoreva kuti iwe unogona achiri kugona kuita asi neimwe nzira. Hupenyu isn'zvekutsvaga iwe pachako; ndezvekusika iwe pachako. Nekudaro, zvigadzire iwe parwendo urwu uye uratidze nyika iwe hauchisiri wakasarudzika mune chero chinhu.
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged chitsitsinho, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, kufamba, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, wiricheya mushandisi, mavhiripu.